Virtualization မှတ်စုတို အပိုင်းအစများ အပိုင်း(၁) - BIM Trainings
Mar 28, 2017 | Posted by	kozeyar | Uncategorized	|
လက်ရှိ Business Transition အများစုက Digital Business ကို Migration လုပ်ရုံမျှသာ မက Cloud Computing ဘက်ကို ရွေ့ လျားလာနေကြတယ်ဆို မြင်ရုံ ကြားရုံမျှ သာ မဟုတ်ဘဲ မိမိကိုယ်တိုင် ပါဝင်ပက်သက်ဖြစ်နေကြပြီးဆိုတာ ကိုယ်ကိုတိုင် အသိပါဘဲ။ ဥပမာအားဖြင့် Mobile banking App တစ်ခုက ထင်ရှားတဲ့ သက်သေတစ်ခုပါဘဲ။
Business workload တွေကို Efficient & Effective ဖြစ်စေဖို့ Hardware base တစ်ခုတည်းပေါ်မှာတင်အမှီပြုပြီး အားကိုးနေရတဲ့အခါ Multi Solution Tasks တွေ ပြီးမြောက်ဖို့ အခက်အခဲတွေ ရှိလာကြပါတယ်။ Competitive World ဖြစ်နေတဲ့ ခုလိုအချိန်မျိုးမှာ ပိုဆိုးပေါ့ဗျာ။ ဒီအခြေနေတွေကို ဖြေရှင်းပေးနိူင်သော နည်းလမ်းများစွာ ဈေးကွက်ထဲမှာ ရှိနေပေမဲ့လည်း Virtualization Technologies ကသာ များစွာသောထိရောက်မှု့ပံပိုးမှု့ တွေ လုပ်ဆောင်ပေးနေတာတွေ့ ကြရပါတယ်။
Virtualization Technologies ဆိုတာနဲ့ မြန်မာနိူင်ငံမှာ VMware ကိုပြေးမြင်ကြမှာ မလွဲဧကန်ပါဘဲ သို့ ပေမဲ့ဈေုးကွက်ထဲမှာ များစွာသော Virtualization Vendor နဲ့ သူတို့ တွေ ရဲ့ Product တွေ ရှိနေကြသေးပါတယ်။ 2016 ခုနှစ်ရဲ့Top 10 Virtualization Technology Companies List ကို http://www.serverwatch.com မှတဆင့် ကူးယူဖော်ပြခြင်ပါတယ်။ 2016 ခုနှစ် ရဲ့ Top Ten Virtualization product & company တွေကိုတော့ အောက်ပါအတိုင်းကြည့် သိရှိနိူင်ပါတယ်။
1. VMware VMware vSphere
3. Citrix Citrix XenServer
4. Red Hat KVM
5. Oracle Solaris Zones, LDoms and xVM
6. Amazon Amazon’s Elastic Compute Cloud (EC2)
7. Google Google Ganeti cluster virtual server management software tool
8. Parallels/Odin OpenVZ
9. Huawei FusionSphere Cloud OS
10. VERDE VDI Virtual Bridges’ VERDE ( virtual desktop infrastructure)
အထက်ဖေါ်ပြခဲ့ တဲ့vendors နဲ့ products တွေ ကို မိမိကြုံတွေ့ ခဲ့ ရတဲ့ Industrial experience နှင့်အတူ လက်လှမ်းမိသလောက် အပိုင်းလိုက်ဖော်ပြသွားပါ့မယ်။
2016 ရဲ့ Top Ten List ရဲ့No.1 ဖြစ်တဲ့ VMware အကြောင်းကို ပထမဦးစွာ အပိုင်းလိုက် ရေးချင်ပါတယ်။ VMware အကြောင်းမပြောခင်မှာ ဦးစွာအနေဖြင့် VMware Myanmar မှ ကိုထွန်းထွန်းလင်းနှင့် အထူးသဖြင့် ကျွန် တော့် အကို တစ်ယောက်လို ဆရာတစ်လောက်လို သွန်သင်လမ်းပြပေးခဲ့တဲ့ ကိုဘိုဘိုဇင် ကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ VMware Myanmar မှ သူတို့ နှစ်ဦးအထူးကြိုးစားအားထုတ်မှု ကြောင့် မြန်မာနိူင်ငံမှာ VMware နဲ့ ပက်သက်တဲ့New Technologies နှင့် Product တွေအကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့ တွေ ပိုမို အနီးကပ်လေ့ လာ သိရှိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
VMware အစ နှင့် vSphere အစ
2009 March မှာ VMware Infrastructure 3.5 မှ အစပြုပြီး Market မှာ စတင်အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ် အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာတော့VMware ESX Server version3and 3.xx versions တွေ အနေနဲ့အသုံးပြုခဲ့ ကြတဲ့ အပိုင်းလေးတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ ဒီနောက်မှာတော့May 2009 မှာ vSphere 4, November 2009 မှာ vSphere 4.1, July 2011 မှာ vSphere 5, August 2012 မှာ vSphere 5.1, September 2013 မှာ vSphere 5.5 , February 2015 မှာ vSphere 6.0 နှင့်October 2016 မှာ vSphere 6.5 စသဖြင့် ရှိခဲ့ပါတယ်။ VMware နဲ့ ပက်သက်တဲ့ အသေးစိတ် History ကို လေ့ လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့https://en.wikipedia.org/wiki/VMware_vSphere မှာ သိရှိနိူင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စကားအစတွေ ပြောရင်းပြောရင်းနဲ့ စကားအစတွေ တော်တ်ာရှည်သွားပါပြီ အဲ့ဒီလို အဓိက အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့VMware Virtualization Technologတွေ အကြောင်းပြောပါတော့မယ်။
VMware Virtualization Technologies လေ့ လာချင်တဲ့ ညီအကိုတွေအနေ ဖြင့် မိမိတို့ သွားချင်တဲ့ Professional လမ်းကြောင်း မှန်ကန်စွာ ရွေးချယ်နိူင်ဖို့ လိုအပ်သလို Customers တွေအနေဖြင့်လည်း မိမိတို့ Business အတွက် လိုအပ်တဲ့ VMware Virtualization Product တွေကို မှန်ကန်အောင်ရွေးချယ်နိူင်စေ VMware Product Group များ အကြောင်း ဦးစွာ သိထားစေချင်ပါတယ်။
အစရှိတဲ့ Product Group တွေ ကြားထဲမှ လက်ရှိ ကျွန်တော်တို့ နိူင်ငံရဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာ အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုနေကြတဲ့ VMware ရဲ့ Products တွေက အောက်ပါ Product Group ထဲမှ ဖြစ်ကြပါတယ်။
1. Datacenter & Cloud Infrastructure
2. Infrastructure & Operations Management
အစရှိတဲ့Product Group တွေထဲက မိမိရဲ့ Business requirement ပေါ်မူတည်ပြီး VMware ရဲ့ Partner တွေ နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ၀ယ်ယူအသုံးပြုကြပါတယ်။ Customer အနေဖြင့် VMware ကနေ Products ကို တိုက်ရိုက် တွေ ၀ယ်ယူလို့ မရပါဘူး။ အထက်ဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ Product Group တွေ အောက်မှာ ပါဝင်မဲ့ Product တွေကို သိထားစေချင်ပါတယ်။
1. VMware vCloud Suite
2. VMware vSphere with Operations Management
4. VMware vSAN
5. VMware vSphere Data Protection Advanced
6. VMware vSphere Storage Appliance
7. VMware vSphere Hypervisor (ESXi)
8. VMware vCloud Director
9. VMware Software Manager
10. VMware Integrated Openstack
11. VMware Continuent
12. VMware vCloud NFV
13. VMware Validated Design for Software-Defined Data Center
14. VMware vCloud Availability for vCloud Director
15. VMware Cloud Foundation
16. VMware vSphere Integrated Containers
1. VMware vRealize Suite
2. VMware vRealize Operations Insight
3. VMware vRealize Operations
4. VMware vRealize Automation
5. VMware vRealize Code Stream
6. VMware vRealize Business for Cloud
7. VMware vRealize Log Insight
8. VMware vRealize Hyperic
9. VMware Site Recovery Manager
10. VMware vCenter Converter Standalone
11. VMware vRealize Network Insight
12. VMware Photon Platform
ဖော်ပြခဲ့တဲ့ Product Group ထဲမှ မိမိ Business အတွက် လိုအပ်မဲ့ Product တွေကို မှန်ကန်စွာ ရွေးချယ်နိူင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဒါ အပြင် အရေးကြီးဆုံး licensing ကိစ္စ ကျန်ပါသေးတယ်။ Senior အထက် Level ဖြစ်တဲ့ IT Manager တွေ အနေ ဖြင့် မိမိ Organize size ရဲ့ IT Budget ကို တွက်ချက်တဲ့ အခါ Product knowledge သာမက licensing အကြောင်းတွေပါ အသေးစိတ်သိရှိထားခြင်းက မိမိ Organization အတွင်း သုံးစွဲမည့် Budget line အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ။ VMware Product တွေကို ၀ယ်ယူတဲ့ အခါ အောက်ပါ license အမျိုးအစားများတွေ့ ရပါလိမ့်မည်။
(1) Essential Kit Plus
(4) Enterprises Plus
စသဖြင့် ရှိပြီး မိမိ vSphere Environment ထဲမှာ VMs 100 နှင့် အထက်ဆိုလျှင်တော့Operation Management အမျိုးအစား ဖြစ်တဲ့ VSOM Package ကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ် VSOM မှာပါတဲ့ VROP က VMs တွေရဲ့အသေးစိတ် Report ကို Management site ဘက်ကို ပေးနိူင်တယ်လို့အကြမ်းဖျင်းမှတ်ပေးပါ။
လကျရှိ Business Transition အမြားစုက Digital Business ကို Migration လုပျရုံမြှသာ မက Cloud Computing ဘကျကို ရှေ့ လြားလာနကွေတယျဆို မွငျရုံ ကွားရုံမြှ သာ မဟုတျဘဲ မိမိကိုယျတိုငျ ပါဝငျပကျသကျဖွဈနကွေပွီးဆိုတာ ကိုယျကိုတိုငျ အသိပါဘဲ။ ဥပမာအားဖွငျ့ Mobile banking App တဈခုက ထငျရှားတဲ့ သကျသတေဈခုပါဘဲ။
Business workload တှကေို Efficient & Effective ဖွဈစဖေို့ Hardware base တဈခုတညျးပျေါမှာတငျအမှီပွုပွီး အားကိုးနရေတဲ့အခါ Multi Solution Tasks တှေ ပွီးမွောကျဖို့ အခကျအခဲတှေ ရှိလာကွပါတယျ။ Competitive World ဖွဈနတေဲ့ ခုလိုအခြိနျမြိုးမှာ ပိုဆိုးပေါ့ဗြာ။ ဒီအခွနေတှေကေို ဖွရှေငျးပေးနိူငျသော နညျးလမျးမြားစှာ စြေးကှကျထဲမှာ ရှိနပေမေဲ့လညျး Virtualization Technologies ကသာ မြားစှာသောထိရောကျမှု့ပံပိုးမှု့ တှေ လုပျဆောငျပေးနတောတှေ့ ကွရပါတယျ။
Virtualization Technologies ဆိုတာနဲ့ မွနျမာနိူငျငံမှာ VMware ကိုပွေးမွငျကွမှာ မလှဲဧကနျပါဘဲ သို့ ပမေဲ့စြေုးကှကျထဲမှာ မြားစှာသော Virtualization Vendor နဲ့ သူတို့ တှေ ရဲ့ Product တှေ ရှိနကွေသေးပါတယျ။ 2016 ခုနှဈရဲ့Top 10 Virtualization Technology Companies List ကို http://www.serverwatch.com မှတဆငျ့ ကူးယူဖျောပွခွငျပါတယျ။ 2016 ခုနှဈ ရဲ့ Top Ten Virtualization product & company တှကေိုတော့ အောကျပါအတိုငျးကွညျ့ သိရှိနိူငျပါတယျ။
အထကျဖျေါပွခဲ့ တဲ့vendors နဲ့ products တှေ ကို မိမိကွုံတှေ့ ခဲ့ ရတဲ့ Industrial experience နှငျ့အတူ လကျလှမျးမိသလောကျ အပိုငျးလိုကျဖျောပွသှားပါ့မယျ။
2016 ရဲ့ Top Ten List ရဲ့No.1 ဖွဈတဲ့ VMware အကွောငျးကို ပထမဦးစှာ အပိုငျးလိုကျ ရေးခငျြပါတယျ။ VMware အကွောငျးမပွောခငျမှာ ဦးစှာအနဖွေငျ့ VMware Myanmar မှ ကိုထှနျးထှနျးလငျးနှငျ့ အထူးသဖွငျ့ ကြှနျ တျော့ အကို တဈယောကျလို ဆရာတဈလောကျလို သှနျသငျလမျးပွပေးခဲ့တဲ့ ကိုဘိုဘိုဇငျ ကို အထူးကြေးဇူးတငျပါတယျ။ VMware Myanmar မှ သူတို့ နှဈဦးအထူးကွိုးစားအားထုတျမှု ကွောငျ့ မွနျမာနိူငျငံမှာ VMware နဲ့ ပကျသကျတဲ့New Technologies နှငျ့ Product တှအေကွောငျးကို ကြှနျတျောတို့ တှေ ပိုမို အနီးကပျလေ့ လာ သိရှိခှငျ့ရခဲ့ပါတယျ။
VMware အစ နှငျ့ vSphere အစ
2009 March မှာ VMware Infrastructure 3.5 မှ အစပွုပွီး Market မှာ စတငျအသုံးပွုခဲ့ကွပါတယျ အဲ့ဒီမတိုငျခငျမှာတော့VMware ESX Server version3and 3.xx versions တှေ အနနေဲ့အသုံးပွုခဲ့ ကွတဲ့ အပိုငျးလေးတှေ ရှိခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ ဒီနောကျမှာတော့May 2009 မှာ vSphere 4, November 2009 မှာ vSphere 4.1, July 2011 မှာ vSphere 5, August 2012 မှာ vSphere 5.1, September 2013 မှာ vSphere 5.5 , February 2015 မှာ vSphere 6.0 နှငျ့October 2016 မှာ vSphere 6.5 စသဖွငျ့ ရှိခဲ့ပါတယျ။ VMware နဲ့ ပကျသကျတဲ့ အသေးစိတျ History ကို လေ့ လာခငျြတယျဆိုရငျတော့https://en.wikipedia.org/wiki/VMware_vSphere မှာ သိရှိနိူငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
စကားအစတှေ ပွောရငျးပွောရငျးနဲ့ စကားအစတှေ တျောတျာရှညျသှားပါပွီ အဲ့ဒီလို အဓိက အကွောငျးအရာဖွဈတဲ့VMware Virtualization Technologတှေ အကွောငျးပွောပါတော့မယျ။
VMware Virtualization Technologies လေ့ လာခငျြတဲ့ ညီအကိုတှအေနေ ဖွငျ့ မိမိတို့ သှားခငျြတဲ့ Professional လမျးကွောငျး မှနျကနျစှာ ရှေးခယျြနိူငျဖို့ လိုအပျသလို Customers တှအေနဖွေငျ့လညျး မိမိတို့ Business အတှကျ လိုအပျတဲ့ VMware Virtualization Product တှကေို မှနျကနျအောငျရှေးခယျြနိူငျစေ VMware Product Group မြား အကွောငျး ဦးစှာ သိထားစခေငျြပါတယျ။
အစရှိတဲ့ Product Group တှေ ကွားထဲမှ လကျရှိ ကြှနျတျောတို့ နိူငျငံရဲ့စြေးကှကျထဲမှာ အဓိကအားဖွငျ့ အသုံးပွုနကွေတဲ့ VMware ရဲ့ Products တှကေ အောကျပါ Product Group ထဲမှ ဖွဈကွပါတယျ။
အစရှိတဲ့Product Group တှထေဲက မိမိရဲ့ Business requirement ပျေါမူတညျပွီး VMware ရဲ့ Partner တှေ နဲ့ တိုငျပငျပွီး ၀ယျယူအသုံးပွုကွပါတယျ။ Customer အနဖွေငျ့ VMware ကနေ Products ကို တိုကျရိုကျ တှေ ၀ယျယူလို့ မရပါဘူး။ အထကျဖျေါပွခဲ့တဲ့ Product Group တှေ အောကျမှာ ပါဝငျမဲ့ Product တှကေို သိထားစခေငျြပါတယျ။
ဖျောပွခဲ့တဲ့ Product Group ထဲမှ မိမိ Business အတှကျ လိုအပျမဲ့ Product တှကေို မှနျကနျစှာ ရှေးခယျြနိူငျဖို့ ရညျရှယျပါတယျ။ ဒါ အပွငျ အရေးကွီးဆုံး licensing ကိစ်စ ကနျြပါသေးတယျ။ Senior အထကျ Level ဖွဈတဲ့ IT Manager တှေ အနေ ဖွငျ့ မိမိ Organize size ရဲ့ IT Budget ကို တှကျခကျြတဲ့ အခါ Product knowledge သာမက licensing အကွောငျးတှပေါ အသေးစိတျသိရှိထားခွငျးက မိမိ Organization အတှငျး သုံးစှဲမညျ့ Budget line အတှကျ အထောကျအကူဖွဈစမှောပါ။ VMware Product တှကေို ၀ယျယူတဲ့ အခါ အောကျပါ license အမြိုးအစားမြားတှေ့ ရပါလိမျ့မညျ။
စသဖွငျ့ ရှိပွီး မိမိ vSphere Environment ထဲမှာ VMs 100 နှငျ့ အထကျဆိုလြှငျတော့Operation Management အမြိုးအစား ဖွဈတဲ့ VSOM Package ကို အသုံးပွုသငျ့ပါတယျ VSOM မှာပါတဲ့ VROP က VMs တှရေဲ့အသေးစိတျ Report ကို Management site ဘကျကို ပေးနိူငျတယျလို့အကွမျးဖငျြးမှတျပေးပါ။
အပိုငျး (၂) ဆကျရနျ